Malezia: Nilaza i Mahathir Fa Nandainga Mikasika ny 9/11 i Bush · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Septambra 2011 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Ελληνικά, polski, English
Mahatsiaro ny fanafihan'ny mpampihorohoro tamin'ny 11 septambra 2001 nitranga tao Etazonia izao tontolo izao. Mbola nanambara indray ny Praiminisitra teo aloha, Mahathir Mohamad fa tsy ny Miozolomana mahery setra no nahavita izany asa fampihorohoroana izany.
Nanao fanambarana miezinezina fa ‘raha azony natao ny namorona Avatar izy ireo, azony atao daholo izay rehetra tiany atao’, amin'ity fotoana ity indrindra, nanambara tao amin'ny bilaoginy i Mahathir fa nandainga tamin'ny vahoaka Amerikana ny Filohan'i Etazonia teo aloha George W. Bush:
Inoako fa lehibe ny hatezeran'ny Arabo Miozolomana ka vitany hatramin'ny manao sorona ny ainy hanaovany kamikazy. Saingy tsy nampandresy lahatra ahy kosa ny mahavita mametraka tetikady sy drafitra tahaka ireny hamotehana araka izay tratra ny fahavalo.
Kanefa diniho tsara ny fanafihana tamin'ny 9/11. Tsy maintsy fotoana maharitraritra no nandaminana azy iny. Tsy maintsy nianatra nanamory tamin'ny fiaramanidina kely ny kandidà. Raha tsy hoe efa zatra nitondra fiaramanidina mahazaka mpandeha marobe izy ireo, tsy ho vitan'izy ireo mihitsy ny nampisidina fiaramanidina efatra hankeny amin'ny kinendry izay tsy lalan'ny voromby.
Mitaky fandaminana ara-potoana sy ara-pitaovana tsara rafitra hatramin'ny antsipiriany izany hanodina fiaramanidina efatra indray mandeha izany. Mety ho vita raha fiaramanidina iray. Fa raha efatra ao anatin'ny fotoana iray kosa! Tsy mino aho fa hahavita asa fampihorohoroana avolenta sy lavorary tahaka izao ny mpampihorohoro Arabo avy any Arabia Saodita.
Folo taona nitsingeranan'ny 9/11 izao. Nandainga mikasika ny fitaovam-piadiana mpandravarava an'i Saddam i Bush. Vokatr'izany dia an'hetsiny ny Irakiana, Afghana ary an'arivony ny tanora miaramila Amerikana namoy ny ainy, an'arivony maro hafa no naratra sy nitondra kilema mandrakizay sy ampijalian'ny fikorontanana ara-tsaina. Firenena roa no ravarava ary nanjary aretina tafiditra lalina ny adin'ny mpiralahaly. Nefa dia mbola tsy misy ny demokrasia.
Lovan’ i George W. Bush izao. Raha afaka nandainga tahaka izao ry zareo hamonoana Irakiana, Afghana ary ny miaramila Amerikana, dia tsy azo tsy saintsainina koa ny mety handaingan'i Bush sy ny namany amin'izay tompon'andraikitra tamin'ny 9/11. Toa tsy zava-dehibe ho an'i Bush izany ain'olombelona izany!!!
Gary Brecher, nanoratra tao amin'ny The Exiled (ireo sesintany) :
Mamirapiratra. Izay no fomba ahazoana ny saina amam-panahin'ny Miozolomana. Tsy mitombina anefa izany; misy ireo (eny efa izay ry zareo) olona maranitsaina vitsivitsy eo an-tampon'ny Al Qaeda. Ary ny hevitra hampiasana fiaramanidina handona trano manaka-danitra, dia tetika tsara tokoa, tsy sarotra tokoa izany rehetra izany.
Indreto fihetsaham-po sasantsany tao amin'ny lahatsoratra nosoratan'i Mahathir : ray2467 nanome hevitra ho an'ny Praiminisitra teo aloha mba hitazona ho azy samirery ny petra-keviny “manapoizina”:
Tazomy ho anao irery ny foto-kevitrao
Maro ireo namoy ainy kanefa mbola manana izany foto-pisainana adaladala izany ihany ianao hanapoizinana ny rehetra hanohitra ny Tandrefana.
Bush no mendrika kokoa noho ianao !
Dtan tsy taitra tamin'ity teorian'ny teti-dratsy nivoaka farany ity:
Nifantoka amin'ny fanitarana ny zavamisy avokoa ny mpanao teorian'ny tetidratsy. Nahoana ilay trano manaka-danitra no tsy nianjera araka ny nieritreretan-dry zareo azy miaraka amin'ny teorian'ny BS milaza fampiasana zava-mora mipoaka tahaka ny Thermite. Tsy manana porofo ny amin'ny fomba nametrahana izany baomba izany akory aza izy ireo. Tahaka ny hoe efa misy teknisiana momba ny tranoavo ampolony na manampahaizana momba ny solotohatra (ascenseur) mametraka ny baomba eny rehetra eny efa am-bolana tsy nanintona manodidina ny zava-nataony nialoha ny trangan-javatra. Ny fomba fisainan'izy ireo tahaka ny anao (efa nanaovana fikarohana izany) dia manao kisarisarinà boribory ao anaty eritreritrao mba hanazavana na handavana izay irinao na izay tsy hinoanao.
Maro ireo olona namoy ny ainy tany amin'ireo tranoavo ireo. Mieritreritra hanome voninanitra ho fahatsiarovana azy ireo ve ianao amin'izao fomba fieritreritrao izao? Mieritreritra ve ianao fa hampitovy ireo mpanao teorian'ny teti-dratsy amin'ny mpanendrikendrinka ny Andriamanitra Tsitoha?
Dr Syed Alwi Ahmad nilaza tamin'i Mahathir mba hiala tsy hanao politika intsony:
Tsy tiako ny manambara ity am-pahibemaso saingy noho ny fanajako sy ny fitiavako an'i Malezia sy ny ASEAN [fikambanam-paritra faritra Azia Atsimo]– Inoako fa tonga ny fotoana ho anao sy LKY (Lee Kuan Yew, filohan'i Singapore teo aloha) –mba handeha any amin'ny filentehan'ny masoandro ary hanadino ny fandokafana [na filazana zavatra ampahibemaso]. Samy manevateva am-pahibemaso ny tenanareo ianao sy LKY ary tsy mendrika ny zava-bitanareo nandritra ny androm-piainanareo.
Milaza izany tsy misy fanenenana aho. Tokony hihetsika ny ASEAN ary azafady – na i Tun na i LKY – fandraisana anjara farany samy tokony ataonareo – ary izany dia –MIALA EO AMIN NY SEHATRA.